साइबर चौतारी: ईन्टरनेटमा नम्रता श्रेष्ठका कुरा
ईन्टरनेटमा नम्रता श्रेष्ठका कुरा
दुई तिन हप्ता अघिको कुरा भिन्दै थियो तर आज गुगलमा नम्रता श्रेष्ठ लाई खोज्नु भयो भने ५४,१००० भन्दा बढी वटा सर्च रिजल्ट देखाई दिन्छन । ट्विटरमा उनको वारेमा गफगाफ सकिने छाटकाट छैन । १८७० भन्दा वढी ब्लगस्पट का ब्लगमा ब्लगिङ्ग भईरहेका छन । रिल लाईफ मा भन्दा पनि रियल लाईफमा गरेको अभिनयले उनलाई लाई राता राता चर्चित बनाई दियो । हाम्रै धरानमा हुर्के बढेकी धराने चेलीले सबैलाई अचम्म पारिन । मेरो बिचारमा उनको यो घटनालाई जुन एङ्गल वाट जसरी विश्लेषण गरे पनि हुन्छ र दोष पनि दिए पनि हुन्छ । उनि, डिजे तान्त्रिक (उनको तस्विर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस ), उनि हुर्किएको सस्कार वा यो भिडियो ईन्टरनेटमा ल्याउने अमुक ब्यक्ती ! (?!)
शहरिया परिवेशमा हुर्केकी र चलचित्रमा पनि त्यही हिसावले आफ्नो चरित्र निर्वाह गर्दै आएकी यि नायिकालाई करिना कपुर लाई बेस्ट हिरोईन भन्ने युवा पुस्ताले पनि खुबै मन पराएका थिए । तर उनको यो भिडीयो प्रकरण पछी उनको त्यो चार्म तहस नहस भईरहेको जस्तो देखिदैछ । युट्यब वाट फैलिएको भनिएको यो भिडीयो युट्युबवाट हटे पनि अनेकै त्यस्ता वेव साईट को लिङ्क नेपाली वेवसाईट फोरम मा फैलिदैछ कि उनको त्यो भुल उनि पछीको कयौ पुष्ताले हेर्न पाउने छन । नयाँ पत्रिकाले त उनको यो भिडीयो प्रकरण उठान मात्र गरेको थियो तर अव यो उनको भिडियो स्काण्डलको दुस्प्रचार नियन्त्रण वाहिर छ । यस प्रकरणमा कोही पनि चुपलाग्न तयार छैन । सर्वप्रथम यस प्रकरण लाई कभरेज गर्ने नयाँ पत्रिकाको वेव साईटमा यस सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका छ सय भन्दा कमेन्ट पोष्ट गरिएका छन । हुदाँ हुदाँ अव त एक अज्ञात ब्यक्तीले रासलिलामा स‌लग्न उनको फोटो होमपेजमा राखेर डाउनलोड गर्नको लगि पोर्न साईटमा रिडाईरेक्ट हुने गरी www.namratashrestha.com भन्ने वेव साईट नै खोली दिएछन ।
उनको यो काण्डमा उनिप्रति साहानुभुती जनाउने हरुलाई स्तब्ध पार्ने गरि उनले प्रतिक्रियमा दिएको भनेर केही वेव साईटले उल्लेख गरेका छन